Zvaungaita Kuti Unzwe Uchikwana Pane Vamwe Uye Wova Neshamwari | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Chokutanga, ona kuti haunzwi uchikwana pachikwata chevanhu vakaita sei.
Handinzwi ndichikwana pavanhu . . .
vechiduku asi vari vakuru kwandiri
Pakuita zvimwe zvinhu:
vanoita zvinhu vakatsiga
vanozivikanwa nevanhu vakawanda
vanongofarira kutamba vari kapoka vasingafaririwo vamwe
Chechipiri, sarudza mashoko anotsanangura zvaunoita paunenge uri pane vanhu vawataura pamusoro apa.
Ndinonyepedzera kuita senge ndinofarira zvavanofarira kana kuita zvavanoita.
Ndinotanga kutaura zvandinofarira ndosiyana nezvavari kutaura.
Ndinoramba ndakati zii ndichitsvaga mukana wokusvova.
Chechitatu, iwe tanga kuita chimwe chinhu! Usatarisira nguva dzose kuti vanhu vatange kutaura newe, dzimwe nguva ndiwe unofanira kutanga kutaura navo. (VaFiripi 2:4) Ungazviita sei?
Usangoti kwati-kwati nevanhu vezera rako. Funga izvi: Uri kuchema-chema uchiti hauna shamwari nepo iwe uri kungoti kwati-kwati nevezera rako here? Kuita izvozvo ndiko kwatinoti kufa nenyota makumbo ari mumvura!
“ Amai vangu vakandikurudzira kuti nditaure nevanhu vakuru kwandiri. Vakandiudza kuti ndichatozoona kuti ndine nyaya dzakawanda dzokutaura nevanhu ivavo. Zvavaitaura chaiva chokwadi, iye zvino ndava neshamwari dzakawanda! ”—Helena, 20.
Iva munhu anogona kutaura nevamwe zvakanaka. Chinokosha (1) kuteerera, (2) kubvunza mibvunzo, uye (3) kunyatsoratidza kuti unofarira vamwe.—Jakobho 1:19.
“ Ndinoedza kuteerera panzvimbo pokuti ndingova ini ndiri kutaura. Uye pandinenge ndava kutaura, handingotauri zvakawanda nezvangu kana kutaura zvakaipa nezvevamwe. ”—Serena, 18.
“ Kana munhu akataura nezvechimwe chinhu chandisingazivi, ndinomukumbira kuti anyatsonditsanangurira, izvo zvinobva zvaita kuti anyanye kutaura ini ndichiteerera. ”—Jared, 21.
“ Ndiri munhu anonyara, saka ndinotozvimanikidza kutaura nevamwe. Asi kana uchida kuva neshamwari, itawo zvinhu zvinoita kuti ufarirwe. Saka iye zvino ndava kutaura nevanhu. ”—Leah, 16.
Taura asi ipa vamwe mukana
Bvunza mibvunzo asi usada kuzivurura
Iva neushamwari asi usaita kuti afunge kuti unoda zvokudanana naye
Iva akatsiga asi usingazvikudzi
Ushamwari Rugare Uye Mufaro Vechiduku Vanobvunza Kuti Vari Kuyaruka